हटेनन सडक मिचेका टहरा :: a1nepal.com.np
हटेनन सडक मिचेका टहरा
व्यवसायी भन्छन्, ‘हचुवाको भरमा निर्णय’
प्यूठान : प्यूठान नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले दाखाक्वाडीदेखि बाग्दुलासम्मको बजार क्षेत्रमा सडक मिचेर बनाइएका टहरा हटाउने निर्णय गर्‍यो । नगरको सौन्दर्यता, ट्राफिक जाम व्यवस्थापापन र व्यवस्थित बजार बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
तर, अस्थायी टहरा हटाउने अभियानमा जनप्रतिनिधीहरुले नगरवासीको साथ पाउन सकेनन् । अभियान अँधुरै भएको छ । दाखाक्वाडीबाट विजुवार बजार क्षेत्रका केही टहरा हटेपनि अन्यत्र जस्ताको त्यस्तै छन् । जिल्लाको प्रमुख बजार केन्द्र बाग्दुलाका टहरा नहटाउँदा दैनिक बजार अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । गाउँगाउँमा पुग्ने बस, जिपहरु बाग्दुलाबाटै छुट्ने गर्छन् । अव्यवस्थित बजार र सडकमै बसपार्कले गर्दा सर्वसाधरणले सास्ती पाएका छन् । सडक मिचेर धेरैले व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन् । बाग्दुला बजार क्षेत्रमा रहेका फलफूल पसलहरु सडक मिचेरै ढ्याब्री राखिएको छ ।
बाग्दुलामा फाट्टफुट्ट रुपमा मात्र अस्थायी टहरा हटाएको छ । मुख्य चोकमा टहरा हटाउन नसकेको नगरवासीले गुनासो गरेका छन् । ‘एउटै नियम कतै लागु गर्ने, कतै नगर्ने हुन्छ ? ’,बाग्दुलाका होटल व्यवसायी धनेश्वर भण्डारीले भने,‘नगरपालिकाले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएजस्तो छ ।’ निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र टहरा हटाउने अभियान थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । टहरा हटाउँदैमा बजारको सौन्दर्य नहुने उनको बुझाई छ ।
व्यवसायी र घरधनीहरुलाई नगरपालिकाले पटकपटक मौखिक र लिखित रुपमै घर अगाडीका अस्थायी टहरा हटाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । व्यवसायीहरुले अटेर गरेका छन् । वर्षौदेखि व्यवसाय संचालन गरेका व्यवसायीहरुले आफूहरुको ‘रोजीरोटी’ नगरपालिकाले गुमाइदिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘सवैलाई समान नियम हुनुपर्छ’,बाग्दुला बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदम बहादुर थापाले भने,‘टहरा हटाउन बारम्वार पत्र आएको छ । व्यवसायीले साथ दिने देखिदैन् ।’
अस्थायी टहरा हटाउने अभियान पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गरेरै छाड्ने प्यूठान नगरपालिकाका नगरप्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपतीले बताएका छन् । बाग्दुला क्षेत्रमा केही चुनौती देखिएको उनले सुनाए । ‘सव्जीमण्डी संचालन गर्ने योजनामा छौँ’,उनले भने,‘त्यसपछि समाधान हुने छ ।’ बाग्दुलाका तरकारी व्यवसायीलाई सव्जीमण्डीमा व्यवस्थापन गर्ने सोँच बनाएको उनले जानकारी दिए । सव्जीमण्डी संचालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
← साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : किन भेटिएनन् ठूला माछा ?	रक्सीले मातेका पाइलटले जहाज उडाउन खोज्दा →